बजारमा ४ हजार तिरेर च्याङ्ग्रा खरिद गर्न बाध्य छन् सर्वसाधारण – Everest Dainik – News from Nepal
बजारमा ४ हजार तिरेर च्याङ्ग्रा खरिद गर्न बाध्य छन् सर्वसाधारण
२०७५, २९ आश्विन सोमबार
बागलुङ, असोज २९ ।
यस दशैँमा च्याङ्ग्राको भाउ महँगिएको छ । गतवर्षको तुलनामा रु चार हजार बढीमा च्याङ्ग्रा खरीद गरेको यहाँका व्यवसायीले बताएका छन् ।
च्याङ्ग्रा कम आउनु, ठाँउठाँउमा कर लिर्नुपर्नेजस्ता कारणले मूल्य बढेको हो । चिनियाँ मुद्राको भाउ बढ्दा पनि च्याङ्ग्रा महँगिने गरेको बताइन्छ । च्याङ्ग्रा रु २७ हजारमा बेचेको व्यवसायी महेन्द्र केसीले बताए ।
“रु २३ हजार मुस्ताङमै प¥यो” उहाँले भन्नुभयो, “गत वर्ष सो मूल्यमा यहीँ आउँथ्यो ।” च्याङ्ग्रा खरीदमा लाग्ने समय, खाना, बास, भाडामै व्यवसायीको बढी खर्च छ । पहिलोजस्तो नाफा हुन छोडेपछि व्यवसायीले च्याङ्ग्रा कम खरीद गर्न थालेका छन् । केसीले ल्याएका १०१ च्याङ्ग्रामध्ये ५० बढी बिक्री भइसकेका छन् ।
उहाँलगायत बागलुङबाट गएका व्यवसायीले एक साता लगाएर च्याङ्ग्रा भित्र्याएका हुन् । च्याङ्ग्रा यहाँ ल्याइ पु¥याउँदा व्यवसायीले तीन-चार ठाउँमा दस्तुर र कर तिर्ने गरेका छन् । यो वर्ष कतिपय स्थानीय तहले पनि कर उठाएपछि व्यवसायी मर्कामा परेका हुन् । अर्का व्यवसायी बलबहादुर थापाले भाउ महँगिएपछि बेच्न गाह्रो भइरहेको बताए ।
“एकै वर्षमा चार÷पाँच हजार महँगो भयो”, उनले भने, “च्याङ्ग्राको व्यापार जोखिमपूर्ण छ ।” थापााले ७० वटा च्याङ्ग्रा बागलुङ भित्राएका छन् । जोमसोम पुगेर ल्याएका च्याङ्ग्रा बेच्दा एक÷दुई हजार नाफा निकाल्न पनि धौ–धौ भएको उनको भनाइ छ ।
व्यवसायी थापाले तिब्बतबाट यो वर्ष कम च्याङ्ग्रा आएकाले मूल्य बढेको बताए । मुस्ताङमा मात्रै पालिने च्याङ्ग्राले माग धान्न नसक्ने हुँदा ठूलो सङ्ख्यामा च्याङ्ग्रा तिब्बतबाट भित्रने गर्छन् । जिउँदो च्याङ्ग्राको मूल्य बढेपछि काटेर बेचिने मासुको मूल्य पनि चर्को छ । प्रतिकिलो रु १२ सय तिरेर च्याङ्ग्राको मासु किनेको बागलुङ नगरपालिका–४ का गोविन्द्रप्रसाद शर्माले बताए ।
महँगै परे पनि उपभोक्ताले च्याङ्ग्राको मासु खोजीखोजी उपभोग गर्छन् । हिमाली हावापानीमा जडीबुटी खाएर हुर्केको हुनाले च्याङ्ग्रा स्वादिष्ट मानिन्छ । बागलुङमा मात्रै दशैँका बेला वर्षेनी करीब दुई हजार च्याङ्ग्रा भित्रने गरेको व्यवसायी बताउँछन् । मुस्ताङबाट झारिने च्याङ्ग्रा गण्डकी प्रदेशका विभिन्न जिल्ला हुँदै काठमाडौंसम्म पुर्याइन्छ । पोखरामा यो वर्ष १७ हजार च्याङ्ग्रा झरेको बताइन्छ । रासस
‘नेपाल विशेष सेवाको गठन र सञ्चालनसम्बन्धी विद्येयक स्वीकार्य हुँदैन्’
भारतमा फेरि दूधको मूल्य, के नेपालमा असल पर्ला ?
खुकुरी प्रहार गर्ने पक्राउ
नेप्से दुई घण्टामा १.२३ अंकको गिरावट
प्रचण्डले पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि नेकपा स्थायी समितिमा छलफल जारी
डलर साट्ने भन्दै १२ लाख ठगी, दिए कागजको विटो !
पीपीएलः बलिङमा कप्तान ऐरी चम्किँदा धनगढीको विजयी सुरुवात
सिर्जना फाइनान्सको ३ लाख २० हजार कित्ता सेयर लिलामी खुल्ने